Thenga i-traffic yabantu yokwenyani yabantu ᐅ Iindwendwe ezikumgangatho wewebhusayithi eziguqula ⇪
Thenga ujolise kakhulu
Singathumela itrafikhi kweyakho:
IZIQINISEKISO ZABASEBENZI BENKONZO
UKUHAMBELA KWENDLELA EYENZIWEYO
Thenga iindwendwe zokwenene zewebhusayithi
Siyayazi indlela ekucaphukisa ngayo ukungafumani traffic ngakumbi kwindawo yakho. Kwaye nokuba uyakwazi ukufumana ukubandakanyeka, yithini na into xa bengakulungelanga ukuguqula ukuba ibe ziindwendwe zenwebhusayithi ezinomdla?
Amaxesha ngamaxesha sibona abantu bachitha yonke imali yabo kwintengiso kwaye befumana ubuncinci bezithuthi kwiiwebhusayithi zabo- Iphulo kuFacebook / Instagram linokukufumanela izinto ezithile kodwa aziguquki kwiwebhusayithi ukugcwala / ukucofa. Kwaye nje kanjalo ukuba amathemba abo kunye namabhongo okuba ngumnini wesithandathu okanye isixhenxe somnini shishini uyenyuka emsini.
Ngaba ukhe uvakalelwe ukuba unokuthi unyathele kwakwindlela enye?
Nokuba ungumntu oxhalabisayo, othe wachitha amawaka eedola kwii-Ads okanye kumnini-shishini elincinci lokuthatha indawo yakho kwi-Intanethi okokuqala; sive ngaphandle. Singanceda!
Ifomula yokukhokelela ngakumbi kunye nentengiso ayisiyondlela inzima njengoko abanye becinga. Into oyifunayo Kaninzi Ithrafikhi ekujoliswe kuyo. Ufuna iindwendwe ezikulungele ukufikelela kwiilali zazo, ukhuphe amakhadi abo etyala, kwaye uthenge into oyithengisayo.
Kwaye eyona ndlela ifanelekileyo yokufumana i-premium traffic kukushiya umsebenzi kuthi.
AKUKHO BUNGAZI NGOKUQINISEKILEYO NGESICWANGCISO SOKUMAKISHWA KWEMPENDULO
AKUKHO MALI MFUMANEKILEYO KWI-FIERY PIT ye-FACEBOOK
AKUSAYI KUTHENGA UKUTHENGA ENYE "INKQUBO" EKUFUNDISA INDLELA YOKWENZA IZIGIDI
AKUSAYI KUPHELA UKUTHABATHA INGQAKA KWABANYE "IINTSHUKUMO"
Ke Njani Umsebenzi Wethu oSebenza ngeTrafiki yeWebhusayithi yakho?
Ukuba awuzange uve nge traffic niche Isalathiso kwakhona, kungenxa yokuba akukho mntu ubizwa ngokuba ngumakhulu angaze akuxelele ngayo-indlela ingamane ikhuphisana nemithombo yabo exabisekileyo yezithuthi kwaye iphazamise inzuzo evela kwizifundo abazithengisayo.
Nangona kunjalo, ukuhanjiswa kwakhona kweendlela ze-niche yindlela efanelekileyo yokufumana i-traffic efanelekileyo kwi-intanethi efanelekileyo kakhulu kwishishini lakho. Oku kuthetha ntoni ukuba Iindwendwe zewebhusayithi ozifumanayo ngabantu esele benomdla kubume beshishini lakho. Umzekelo, umthengi othengisa izixhobo zemoto uya kufumana ukugcwala okuthunyelwa kwiindawo zeemoto.
Sisebenzisa uluhlu lweendlela ezifana ne-pop-unders, oomatshini bokufunda ii-algorithms, kunye nokuthengwa kwemithombo yeendaba kwimithombo yeenkcukacha ezinkulu zenethiwekhi. Kwaye, sibambe uluhlu lweentengiso ezinkulu zemimandla kunye niches.
Ngokunyuka kwe-E-Commerce kunye neDropshipping kule minyaka idlulileyo, siyazi ukuba iinkonzo zethu kufuneka zihambelane ngokuthe ngqo nezinto ezifunekayo kwintengiso. Yiyo loo nto iqela lethu leengcali livavanya rhoqo kwaye zenze ukuba iinkqubo zethu zisebenze ngokuvavanywa ngqo kwiinzame zethu zeR & D. Isiphumo? Esona sithuba siphezulu sokwenza ukugcwala ngokuthe ngqo kunokwenzeka! Sisebenzisa itekhnoloji ye-AI yamvanje (yeArtificially Intelligent), sihambisa ukugcwala kwezithuthi ezichaphazeleka kakhulu kwi-niche yakho (Umzekelo, umntu othengisa izixhobo zobuchwephesha uya kufumana ukugcwala kwiiwebhsayithi zeetekhnoloji / kwiibhloko)
Zonke izithuthi ziipesenti ezili-100 zabantu kwaye zijolise kakhulu kwaye ke oko kukuphucula ukubonakala kwewebhusayithi kunye namathuba okuthengisa.
Uluhlu lwethu olukhethwe ngononophelo lwewebhusayithi lusebenza ukuhambisa iindwendwe kwiwebhusayithi ukusuka kwi-IPs eyahlukileyo kwilizwe lakho elikufunayo kunye niche. Sigubungela uluhlu olubanzi lwamazwe kwi i-USA, I-UK, iYurophu, Singapho , IAsia, neAfrika. Ngorhwebo oluphezulu lwe-320 niche, siyaqinisekisa ukuba ufumana ukugcwala okuphezulu okujolise kuyo, ngaloo ndlela ukongeza ukuthandwa kwewebhusayithi yakho, kunye nokwandisa amathuba angapheliyo okuthengisa.
Unathi kwicala lakho, iwebhusayithi yakho ibotshelelwe ukufumana ukubonakala okungakumbi.
1. Zalisa IFOMU
2. MASISENZE IZIQINISEKISO ZAKHO
3. UKUHLAZIYA NOKUXELISA NJENGOKU SIYAZUZA YONKE INDAWO YOKWENZA
Ifom yoku-odola oyigcwalayo ukuphuma kwakho isinika zonke iinkcukacha esizifunayo ukuze ufezekise isicelo sakho. Kuthatha nje imizuzwana ye-30 ukuyigqiba.
Ngaphambi kokuba siqalise inkqubo yethu, siyaqinisekisa ukuqinisekisa isicelo sakho ngokuhambelana namanyathelo ethu okhuseleko. Qiniseka, asikuceli ukuba ufumane naliphi na ipaswedi-imfihlo yakho ibaluleke kakhulu kuthi!
Ngexesha lenkqubo yokuqinisekisa, siyaqinisekisa ubunyani beshishini lakho - emva kwayo yonke loo nto, sisebenza ngokusemthethweni kwaye ke silindele ukuba abathengi bethu babe ngaphezulu! Oko kuthetha ukuba indawo yakho kufuneka ibe semthethweni kwindalo. Indawo yakho ayinakuba nayo nayiphi na i-spyware, i-adware, intsholongwane okanye iintsholongwane. Ukuba ubeka iodolo kwezi ndidi zewebhusayithi, siyakuvala umkhankaso wakho wokugcwala, kwaye awuyi kufumana mbuyekezo.
Logama nje uyinkampani esemthethweni ehambelana nemigaqo kunye neemeko zethu, isicelo sakho siyakwenziwa ngeentsuku ezintathu ukuya kwezine!
Kwaye voilà! Nje ukuba usithumele isicelo, akukho okunye ongakwenza. Uya kuqala ukubona ukugcwala kwiwebhusayithi yakho ngaphakathi kwe-3 ukuya kwiintsuku ze-4 zesicelo sakho. Kwaye yonke into oyithandayo iqinisekisiwe ukuba undwendwe oluyinene lomntu!
I-Niche Online Traic ibamba ngaphezulu kweminyaka engama-2 yamava
Sisebenza ngeeNethiwekhi zethu ezinkulu zeNtengiso yeHlabathi. Inkampani isebenza ngothungelwano olukhulu lwamaqabane ezentengiso zehlabathi ezisa ukugcwala kwabantu okwenyani, kunye nokuzama impumelelo yabathengi. Iqela lethu lisebenzisa italente ephezulu, kubandakanya abantu abasebenze ngamagama amakhulu kubuchwephesha kunye nentengiso.
Sisiseko esingumthombo wokuqala wendlela ethembekileyo ye-Intanethi kunye neendwendwe ezijolise kuzo. Siyazingca ngomsebenzi wethu ukuqinisekisa owona mgangatho uphezulu kunye nokufaneleka kokugcwala kwabantu kwiwebhu.
Yiloo nto esenza ukuba sibe ngumthombo we-traffic OTHENGEKILEYO wokudodobala, i-E-Commerce kunye nalo naliphi na elinye ishishini elinobukho be-Intanethi. Ukuza kuthi ga ngoku, sibonelele ngezithuthi ezingaphezulu kwe-50,000 XNUMX iivenkile ezikwi-intanethi, kumaqonga ahlukeneyo, kubandakanya iShopify, i-Clickbank, i-Etsy, i-Ebay kunye neAmazon. Sukuba nexhala- sakugubungela!
Ukuthenga ithrafikhi evela eNiche kwiTrafikhi ye-Intanethi akuthethi kuphela ukonyusa okusebenzayo kubukho bakho kwi-Intanethi, kodwa nakwinkonzo yabathengi ephezulu.
Nje ukuba ukhethe i-Niche yeTrafikhi ye-Intanethi, uya kufumana indlela yethu eyahlukileyo ukuba ibe yi-niche oyithandayo.
Imizi mveliso iValiweyo (ayinqamlelwanga):
Itrafikhi yeBhlog yakho / Indawo yeSixeko
Ipropathi / Izakhiwo nomhlaba
Ukuthandana kunye nobudlelwane
I-CBD / Hemp Oils
Imipu / Ukuphelisa
Iiarhente zeDijithali / zokuYila
Uninzi lwamashishini amaninzi e-B2B kunye ne-B2C
Shiya i-traffic yakho kwi -ingcali
Iintengiso ze-Facebook kunye nePhulo lokuPhembelela ukuxhaphaza?
Ngaba uyagula kukuba une- “Likes” kwaye akukhoTrafikhi eyenziweyo?
Sikuqonda. Kwaye sinayo into oyifunayo.
Sivavanya zonke izithuthi, Iindlela zethu ze-AI zifunda kwaye zihlengahlengisa i-24 / 7 ukuze ukuhambelana nomgangatho wokugcwala uvele ngcono isekondi nganye.
Iindwendwe ezithunyelwe kuwe ngabantu abanomdla kwiNiche yakho, ngenxa yoko lelona thuba liphezulu lokuguqulwa.
Sikhonze ishishini iminyaka engaphezu kwe-2. Inani le-B2B kunye namashishini e-B2C akhule exonentially nathi kuyo yonke iminyaka.
Inketho yokujolisa kwiNiche
Abatyeleli abayi-200 bemihla ngemihla iinyanga ezi-6 OKANYE ii-1000 zaBandwendweli beMihla ngemihla kwinyanga enye
Abatyeleli abayi-200 bemihla ngemihla iinyanga ezi-12 OKANYE ii-2000 zaBandwendweli beMihla ngemihla kwinyanga enye
Nyusa umgangatho wegama eliphambili
Yandisa ukuKhangela kwabaThengi
Ukusika iindlela zeEdge
OKO KUTHETHWA NGABAKHONZI BAM NGO US
I-SETH - UMNINI WEZIKO LONXIBELELWANO
"Ndivavanye ukugcwala kwitrafikhi yesayithi entsha kwaye ndingatsho ukuba yeyona nto ilungileyo, ukuthembana kwabantu okwenyani. Ngokuqinisekileyo sizakuzama kwakhona."
I-LAURA - YENZA UMNINI WESITOLO
Siyekile ukusebenzisa iintengiso ze-FB ezibizayo emva kokusebenzisa aba bantu. Inkonzo engumzekelo!
UMark - UMPHATHI WEZOKUTHENGA kwinkampani ye-saas
I-NicheOnlineTraffic ibonelela ngenkonzo enkulu ngenkxaso efanelekileyo nangokuchanekileyo. Benza konke okusemandleni abo ukukubonelela ngohambo lwezithuthi oludingayo, ukugcwala kwabo kukhuselekile kwaye kuyinyani. Enomtsalane ngokwenene, liwonga ishishini lam !.